अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था - Online Majdoor
अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ / वाणिज्य विचार विशेष समाचार
तालिवानहरूको तत्कालको लक्ष्य सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु र समावेशी सरकार स्थापना गर्नु हो । त्यो सरकारले बीस वर्षको युद्धले ध्वस्त बनेको अफगानिस्तानको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । उनीहरूको काँधमा आइपरेको अर्को लक्ष्यहरूमा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो ।
अनिश्चय र सरकार बनिनसकेको आजको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पर्ख र हेर नीति अवलम्बन गरेको छ । अफगानी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के हो ? अफगानिस्तान विशृङ्खलित बन्ने सम्भावना कति छ ? अफगान जनताको अवस्था के होला ?
तालिवानको हातमा २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम आकारको अर्थतन्त्र छ । विश्व बैड्ढअनुसार सन् २००३ देखि २०१२ मा अफगान अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सेवा क्षेत्रको सक्रिय विकासको कारण ९.४ प्रतिशत थियो । सन् २०१५ देखि २०२० औसत वार्षिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । एसियाली विकास बैड्ढले अप्रिलमा जनाएअनुसार सन् २०२० मा अफगानिस्तानको कुल गार्हस्थ उत्पादन कोभिड–१९ महामारीको कारण पाँच प्रतिशतमा खुम्चियो । हाल अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ५२० अमेरिकी डलरभन्दा न्यून छ । त्यो भनेको सुडान वा नाइजरभन्दा कम हो । त्यहाँको निजी क्षेत्र निकै सानो छ । कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ७५ प्रतिशतलाई रोजगार दिएको छ ।
अफगानिस्तानको एउटा प्रमुख समस्या भनेको शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न लाग्ने ठुलो खर्च हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत सुरक्षाकै निम्ति खर्च हुने गरेको छ । विश्व बैड्ढअनुसार सामान्यतः अन्य न्यून आय भएका देशहरूको सुरक्षा खर्च तीन प्रतिशतमात्र हुने गरेको छ ।
त्यसबाहेक विदेशी सहायताप्रति अफगानिस्तानको निर्भरता असमानुपातिकरूपमा ठुलो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अनुपात सन् २००९ मा झन्डै शतप्रतिशत थियो । सन् २०२० मा त्यो झरेर त्यो ४२.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तथापि, त्यो अझै डरलाग्दो गरी उँचो छ ।
केही दिनअघि बाइडेन सरकारले न्युयोर्कस्थित फेडेरल रिजर्भ बैड्ढमा अफगानिस्तानको नाममा रहेको २२ टन सुनमाथि तालिवानको पहुँचलाई रोकेको बताएको छ । २२ टन सुनको मूल्य लगभग १ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर हुने लण्डन बुलियन मार्केट एसोसिएसनले जनाएको छ ।
संरा अमेरिकाको अर्थ सचिव जनेट एलनले सो निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ र अमेरिकी विदेश विभाग र राष्ट्रपति कार्यालय यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि सक्रियतापूर्वक लागेको छ ।
त्यसमाथि अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैड्ढ दा अफगानिस्तान बैड्ढले विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य धन दौलत आफ्ना भूमिगत कोठाहरूमा लुकाएको विश्वास गरिएको छ । तर, अफगानिस्तानका अधिकांश सम्पत्ति मूलतः विदेशी बैड्ढहरूमै छन् । सबभन्दा पछिल्लो एउटा आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार दा अफगानिस्तान बैड्ढसँग जम्मा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको धन दौलत छ । जसमध्ये १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सुन र ३६ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा छ ।
वाशिङ्टनको परराष्ट्र सम्बन्ध परिषद्का विभिन्न आर्थिक तथ्याड्ढअनुसार तालिवानले वर्षमा ३० करोडदेखि १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर अफिमको खेती, लागुऔषध ओसारप्रसार, आफ्नो नियन्त्रित क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधिमाथि कर र विदेशबाट अवैधानिक ओसारप्रसारजस्ता विभिन्न अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिबाट आम्दानी गर्ने गरेको छ । उदाहरणको लागि, संसारको झन्डै ९० प्रतिशत हेरोइन हेलमन्ड उपत्यकाबाट आउने गरेको छ । दक्षिणी अफगानिस्तानको सो उपत्यकामा तालिवानको बलियो आधार छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घअनुसार तालिवानले अनौपचारिक खनिज उत्खनन्बाट झन्डै ४६ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ ।
सरकारी तथ्याड्ढअनुसार सन् २०१९ मा देशको कुल निर्यात ८७ करोड अमेरिकी डलर बराबर छ । जसमध्ये ७१ करोड डलरको वस्तुहरू छन् । अर्कोतिर अफगानिस्तानको आयात पनि निकै कम छ । त्यहाँको कुल आयात झन्डै ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । त्यसमध्ये उपभोग्य वस्तुको आयात २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरले खस्केको छ । सबभन्दा उल्लेखनीय आयात भनेको नरम कोइला (पीट), पेट्रोलियम पदार्थ र वनस्पति तेल हुन् । इरान, चीन र पाकिस्तान अफगानिस्तानका मुख्य व्यापार हुने देश हुन् ।
अफगानिस्तानमा खाद्य सड्ढट सघन बन्दै छ । १ करोड ४० लाख जनता भोकै दिन काट्छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगानिस्तानको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘तत्काल केही गर्न’ आग्रह गरेका छन् । बिस्लेले मानवीय सड्ढट रोक्न अर्को महिनासम्ममा अफगानिस्तानमा तत्कालै कम्तीमा २० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
अफगानिस्तानको सामाजिक–आर्थिक र वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा भविष्यमा आर्थिक विकास, लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जना सरकारका प्राथमिकतामा पर्नेछन् । एसियाली विकास बैड्ढअनुसार सन् २०२० मा अफगानिस्तानका ४७ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । सन् २०१९ मा अफगानिस्तानमा हरेक एक हजार शिशुमध्ये ६० जना आफ्नो पाँचौँ जन्म दिन मनाउन पनि नपाई मर्ने गर्छन् । विश्व बैड्ढको तथ्याड्ढले बितेका दस वर्षभरि र सन् २०२० मा अफगानिस्तानको बेरोजगारी दर ११.२ प्रतिशत रह्यो ।
युरोपेली संसदको विकास समितिका प्रमुख टमस टोबले अगस्ट १९ मा भनेका थिए,“सुख्खा, कोभिड–१९ महामारी र लडाइँको कारण अफगानिस्तानका आधा जनता अर्थात् १ करोड ८० लाख मानिसलाई तत्कालै मानवीय सहायताको खाँचो परेको छ । झन्डै ४० लाख मानिस आन्तरिकरूपमा विस्थापित भएका छन् ।”
यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अफगानिस्तानमा मानवीय मामिलाका संयोजक रमिज अलाकबारोभले अगस्ट १९ मा आरआईए नोभोस्टी समाचार संस्थालाई तालिवानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आफ्ना नागरिकलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।
अफगानिस्तानको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सड्ढटपूर्ण छ । खाद्य अभावको कारण अफगानिस्तानमा मानवीय सड्ढटको सम्भावना प्रबल छ । साथै भयानक महामारी फैलाउने सङ्क्रामक रोगहरू फैलिने सम्भावना पनि अधिक छ । अफगानिस्तानमा अझैसम्म वैधानिक सरकार बनिनसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल अफगान जनतालाई सहयोग दिन हतार भइसकेको छ । त्यसको आरम्भ अफगानिस्तानको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर गर्नुपर्छ ।
लेखक कीर्गिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
नेपाली अनुवाद : मनिषा
केरालामा अहिले किन बढ्यो सङ्क्रमण ?
प्रहरीलाई कमजोर पारी शासकहरूले देशलाई नै कमजोर पारिरहेका छन्